KuMongameli ohlonitshwayo weRiphabhlikhi yase-Italiya-iHlabathi Matshi
Ikhaya » Izaziso » Amanqaku eenkcukacha » KuMongameli ohlonitshwayo weRiphabhlikhi yase-Itali
Ukusuka kwiKomiti yeHlabathi yokuKhuthaza yeHlabathi yoKhuphiswano ngoMatshi yeHlabathi yoXolo kunye nokungaThobelakali kuMongameli weRiphabhlikhi yase-Itali
Meyi 27 ye2020
Mnu. Mongameli oBekekileyo
Kuphela yindlela yokudibana kunye yencoko ezinokoyisa umahluko, kwaye
Ingxoxo-mpikiswano kunye nokujongana ukusukela kwinto yokuqala epapashwa ngayo ngo-2009 iqhubekile nendlela yayo, isuka kwi Ihlabathi likaMatshi ngoxolo noKhuselo, concebido y coordinado por Rafael de la Rubia de la asociación “Mundo sin Guerras y sin Violencia”, con la participación de personas, organizaciones e instituciones de los seis continentes.
Ushicilelo lwesibini lweHlabathi liphela lwaqala eMadrid ngo-Okthobha 2, 2019, uSuku lweHlabathi lwe
I-UN yeZizwe eziManyeneyo ngaphandle kobundlobongela kwaye yaphela ngo-Matshi 8, uSuku lwaMazwe ngaMazwe lwaMazwe ngaMazwe, eMadrid. Ekukhuleni kwayo, imixholo eyahlukeneyo yachukunyiswa:
ukumiliselwa okukhawulezayo kwesixhobo se-Nuclear Weapons Ban Convention, ukukhulula izixhobo ezabiweyo
ekutshatyalalisweni kunye nasekoneliseni iimfuno zabantu ezisisiseko;
ukuphinda ifumane iZizwe eziManyeneyo ngokuthatha inxaxheba koluntu, ukukhulula ibhunga lakhe
ukuba iguqulwe kwiBhunga loXolo lweHlabathi, kwaye idale iBhunga lezoKhuseleko
Okusingqongileyo kunye nezoqoqosho;
ukwakha iimeko zophuhliso oluzinzileyo ngokwenene kwiplanethi;
ukudibanisa amazwe kwimimandla kunye nemimandla, kunye nokwamkela iinkqubo zoqoqosho ukuqinisekisa impilo-ntle ye
woyise zonke iintlobo zocalucalulo;
yamkela ukungabi naluhlanga njengenkcubeko entsha, kunye nokusetyenziswa okungasebenziyo njengendlela yokwenza.
I-Matshi yeHlabathi nayo yayisusela nge-27 ka-Okthobha ukuya nge-24 kaNovemba ka-2019 indlela yokuhamba ngolwandle ukuya kwiMeditera yoxolo kwaye ingenazixhobo zenyukliya, esekwe kwiSibhengezo seBarcelona (1995).
Ikomiti yase-Italiya yokuKhuthaza iHlabathi yoKhuselo lweHlabathi ngoXolo kunye nokuNgenzi gonyamelo kwafuneka ihlehlise indlela yokudluliswa kwabathunywa behlabathi ngenxa ye-Covid19, kodwa kwizixeko ezininzi kukho namalinge kwimxholo yo-Matshi.
Ikomiti yokuKhuthaza yase-Italiya ixhasa izibheno esele zenziwe ukususela oko kwavela iCovid-19
ukuhambisa inkcitho yasemkhosini ukuxhasa impilo, intlupheko, indalo esingqongileyo nemfundo. Khumbula umthetho wokuqalwa kwabasebenzi osesePalamente, wokuseka kunye nokuxhasa ngezimali isebe lezomkhosi elingakhuselekanga nelinogonyamelo, likhuthaza iphulo lokwazisa eliqokelele amawaka abantu abatyikityi e-Itali.
Sikwabonakalisa ukukhathazeka kwethu ngomngcipheko obangelwe kwezi nyanga zokungenelela kwe
idijithali kwinkululeko yakho yobuqu kwinethiwekhi ye-5G
Ngalo mhla wokubhiyozela, ubaluleke kakhulu kwilizwe ngeli xesha lingumangaliso, siye saya kuwe njengabaqinisekisi boMgaqo-siseko ngokuqiniseka ukuba lixesha (ngoku) lokuthatha amanyathelo afanelekileyo kwintlalo-ntle yomntu wonke kunye Ukukhusela indalo.
Kwizukulwana ezitsha, abo bahlala baphendukela kubo, njengaxa intetho isandula ukubulawa ngokubulawa kwabantu iCapaci, asifuni kulishiya ilizwe linje siphila kulo namhlanje. Siyakholelwa kwi-Italiya
kufanele ukuba yenze ingalo ibe yingongoma eqinileyo yezopolitiko zayo nezoqoqosho ngokuhambelana noMgaqo-siseko. Inyathelo lokuqala iya kuba kukuqinisekiswa kwexesha lesivumelwano seZizwe eziManyeneyo malunga nokuThintelwa kwezixhobo zenyukliya, osichukumisa ngokusondeleyo ngenxa yobukho beemfazwe zenyukliya ezingama-70 kwiziseko zeAviano (Pordenone) kunye noGhedi (Brescia), izixhobo zentshabalalo. indawo yonke ngoku isendleleni eya kuluntu. kunye nobukho e-Itali ye-11 yamazibuko ezomkhosi ezomkhosi: IAugusta, iBrindisi, iCagliari, iCastellammare di Stabia, iGaeta, iLa Maddalena, iLa Spezia, iLivorno, iNapoli, iTaranto kunye neTesteste.
Kwisiseko senqaku le-11 loMgaqo-siseko, sikucela ukuba ungenelele ngokukhawuleza kwezi ndawo zilandelayo ngokomgaqo-siseko wakho kunye nemisebenzi, ngedini leendleko zomkhosi, ukurhoxa komkhosi oxhobileyo wase-Italiya kwimishini engekho semthethweni. , kunye nokuvalwa kwezakhiwo ezilinganayo zomkhosi wezangaphandle e-Itali.
Apho kukho imfazwe, amahlathi kuya kufuneka akhule (ngaba sifuna ukuba akhule?) Ukunikezela ngeoksijini, ukuba baninzi abantu abalahlekileyo ngexesha loobhubhani kwaye kufuneka sikhulise amaphupha, sibabone bephumelela kubomi bezizukulwane zasekhaya. abazifunayo kakhulu iindawo zenkcubeko.
Ngeminqweno yethu emihle.
Ikomiti yokuKhuthaza yaseNtaliyane uMatshi ngoSuku lweHlabathi loXolo kunye nokungaPhathi kakuhle
Amagqabantshintshi e-1 ku "Mongameli ohloniphekileyo weRiphabhlikhi yase-Italiya"
UCecilia Umaña Crux
29/05/2020 ngo-17: 25
Ukugqwesa ndiya kulinda ukuze eColombia sikwazi ukongeza kuba sishukuma ngemvakalelo efanayo xa sikhangela uxolo, hayi imfazwe, hayi iibhombu zeatom, hayi naluphi na uhlobo lobundlobongela. Ihlabathi ngo-Matshi 1 kunye ne-2 bashiye indlela yabo enkulu yemvakalelo yokwakhiwa kwehlabathi elitsha kunye nekamva elivulekileyo. Baninzi kuthi abalungileyo kwaye sifuna utshintsho lwehlabathi. Uxolo, amandla kunye novuyo. Ceciu